भिटेन लाई , अभद्र व्यवहारको मुद्दा - KagajPatra Media Network
Read Time:2 मिनेट, 16 सेकेन्ड
कात्तिक ० ७ बनेपा ।
चर्चित र्‍यापर भिटेन पक्राउ परेका छन् । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको टोलीले उनलाई जाउलाखेलबाट पक्राउ गरेको हो ।
वास्तविक नाम समीर घिसिङले ‘गरिबी … गीतबाट र्‍याप यात्रा थालेका थिए । दर्जन बढी गीत गाइसकेका उनको पछिल्लो गीत ‘यस्तै त हो नि ब्रो’ निकै चर्चित भएको थियो ।
त्यही गीतमा भएका शब्दहरु र फेसबुकमा राखेको तस्वीरका आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको महाशाखाका प्रमुख एसएसपी सहकुल थापाले जानकारी दिए ।
पक्राउ परे लगतै उनको यो गीतलाई युट्युबबाट हटाउने लगाइएको थियो । उनलाई अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलाइन महानगरीय प्रहरी वृत्त ललितपुर पठाइएको छ ।
के भन्छन् सरकारका प्रवक्ता ?
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री बास्कोटालाई थापा र भिटेन पक्राउबारे प्रश्न सोधिएको थिए ।जवाफमा उनले परिवारसँग बसेर तीनले गाएको गीत सुन्ने समर्थन राख्नुहुन्छ ? भनेर प्रतिप्रश्न गरे ।
विप्लव समुहका थाहा नगर इन्चार्ज पक्राउ
कात्तिक ० ८ बनेपा । प्रतिबन्धित विप्लव नेतृत्वको नेकपाका थाहा नगर इन्चार्ज अनुप भनिने श्यामकुमार लामा पक्राउ परेका छन् । लामालाई शुक्रबार बिहान नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोलीले थाहा नगरबाटै पक्राउ गरेको हो । गत असोज २७ गते थाहानगरपालिका बडा नम्वर ५ को कार्यालयको आगजनीलगायत आपराधिक घटनामा संलग्न […]
फिल्म हलमा राष्ट्रगान बजाउन निर्देशन
बनेपामा लकडाउनको उन्लघन गर्ने ६ मोटरसाइकल चालक कर्वाहिमा
भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध बनेपाको चारदोबाटोमा विरोध प्रदर्शन
वाङ यी र प्रचण्ड बिच भेट बार्ता
आज देशभर मेघ गर्जन र चट्यांगसहित वर्षा हुने मौसमविदको भनाई
अन्तराष्ट्रिय युवा दिवसको अवसर पारेर पनौती नगरपालिकामा युवाहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम